Ime ihe ike na Egwuregwu vidiyo: Ọhụụ Ọhụrụ - Ụwa 2022
Ime ihe ike na Egwuregwu vidiyo: Ọhụụ Ọhụrụ
Ọ dịla anya a ghọtara na egwuregwu vidio na-eme ihe karịrị nanị na-enye ụmụaka ihe ndọpụ uche.
Ugbu a, nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya nke Malena Ivarsson sitere na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchegbu na Mahadum Stockholm na-enyere aka igosi na ime ihe ike na egwuregwu vidio adịghị njọ. Mgbe ha na-atụnyere ụmụ nwoke nọ n'afọ iri na ụma na egwuregwu vidiyo na-eme ihe ike na ndị na-adịghị eme ihe ike, ndị nchọpụta chọpụtara na ụmụ nwoke ndị nwere ohere karịa nwere mmeghachi omume anụ ahụ dị ole na ole, dị ka obi mgbawa na-adịghị mma nke nsogbu ihi ụra, na nchekasị nke uche na nke mmetụta uche karịa ndị na-enwechaghị ekpughe ime ihe ike na egwuregwu..
N'iburu n'uju na ịdị ukwuu nke omume ime ihe ike nke ndị na-eto eto na-eme taa, nchọpụta nke ọmụmụ a na-abịa n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ bụghị naanị na nke a bụ ihe na-egosi na egwuregwu ahụ bụ akụkụ ụfọdụ maka mmekpa ahụ, dịka Ivarsson na ndị ọrụ ibe kwuru na ha achọpụtala na ọmụmụ gara aga, mana ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ebe nnabata nke omume dị otú ahụ n'etiti ndị ntorobịa si.
N'ime ọmụmụ ihe ahụ, a gwara ìgwè ụmụ nwoke ka ha kpọọ egwuregwu ime ihe ike ma ọ bụ nke na-adịghị mma maka awa abụọ maka mgbede abụọ n'izu. A na-atụle ọdịiche dị na mmeghachi omume nke uche na nke mmetụta uche tinyere àgwà ụra n'ime otu abụọ ahụ dị ka ụzọ iji tụnyere mmeghachi omume na mmetụta ha n'ozuzu ha mgbe egwuregwu egwuregwu gasịrị.
Ụmụ okoro ndị na-emekarị egwuregwu vidio na-adịghị eme ihe ike kọrọ na ụra dị ala n'ụtụtụ mgbe ha gwusịrị egwuregwu ime ihe ike. Otu a kọkwara na ha na-ewekarị iwe mgbe ha gwuchara egwuregwu ime ihe ike.
Ka ọ dịgodị, ụmụ okoro ahụ na-egwu nanị egwuregwu ime ihe ike kọrọ na ọ dịghị ihe dị iche n’ịdị mma ihi ụra n’abalị ha na-eme egwuregwu ime ihe ike ma e jiri ya tụnyere abalị ndị ha na-adịghị eme egwuregwu.
N'ime nnyocha ndị gara aga, ndị nchọpụta achọpụtala na egwuregwu ime ihe ike na-eme ka ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-akpa ike. Ọmụmụ ihe ndị a nwere otu ụmụaka na-egwu egwuregwu vidiyo na-eme ihe ike wee tụọ ọnụọgụ obi ha na mgbanwe ọnụọgụ obi (HRV). Ndị a bụ ụzọ dị mma iji tụọ nzaghachi anụ ahụ na nrụgide uche na nke mmetụta uche, ebe ọ bụ na nrụgide na-ebutekarị ọnụọgụ obi na iku ume na mbụ.
Ivarsson na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na ọnụọgụ obi na nha HRV na ụmụ nwoke na-egwu egwuregwu vidiyo na-adịghị eme ihe ike dị elu ma dị iche iche karịa ụmụ nwoke na-egwu egwuregwu ime ihe ike. Nke a na-egosi na ndị otu na-adịghị eme ihe ike na-enwe mmetụta nke ọma na egwuregwu vidiyo ime ihe ike na-emetụta ha.
Ndị otu a gwara ka ha na-egwu egwuregwu ime ihe ike mgbe niile nwere ọnụọgụ obi nkịtị yana obere mgbanwe ọnụọgụ obi mgbe ekpughere ya na egwuregwu vidiyo ime ihe ike, na-egosi nhụsianya nke nzaghachi mmetụta uche na nke mmụọ.
Enweghị nchekasị, ma ọ bụ mbelata mmeghachi omume mmetụta uche na nke mmụọ, na-egwu egwu ebe a. Otu ụmụ nwoke ndị na-egosipụtakarị egwuregwu ime ihe ike nwere nzaghachi dị nta maka ime ihe ike na ihuenyo n'ihe gbasara mgbanwe nke àgwà ihi ụra, mgbanwe n'echiche, yana mmeghachi omume anụ ahụ nke a na-atụle site na ọnụọgụ obi.
Ọ bụrụ na, n'ime oge dị mkpirikpi, egwuregwu vidiyo ime ihe ike na-eme ka ndị ntorobịa na-eme ihe ike karị, gịnị ka enweghị mmetụta mmetụta uche ogologo oge ga-apụtara ọha mmadụ n'ozuzu?